Kooxda Lazio oo Juventus ka aqbalaysa €25m iyo bareemiyo oo ay ku qaadanayso Keita Baldé Diao – Gool FM
Kooxda Lazio oo Juventus ka aqbalaysa €25m iyo bareemiyo oo ay ku qaadanayso Keita Baldé Diao
Raage July 27, 2017
(Roma) 27 Luulyo 2017 – Kooxda Lazio ayaa sida lasoo sheegayo €25m iyo bareemiyo ka aqbalaysa Juventus oo cayrsanaysa Keita Baldé Diao.
Maareeyaha Guud ee Bianconeri jaalle Giuseppe Marotta ayaa shalay xaqiijiyay inay dalab ka gudbiyeen laacibkan caalamiga ah ee reer Senegal, taasoo la rumaysnaa inay tahay ilaa €20m.
Balse sida ku dhigan calciomercato.com, Keita ayay ka go’an tahay inuu ku biiro kooxda Torino halkii uu Inter ka aadi lahaa, waxayna sidaa darteed kooxda Gorgorka ama Aquile ay hoos u dhigtay dalabkeedii ahaa €30m oo ay ka dhigtay €25m oo kaash ah iyo bareemiyo.
Waloow ay weli lacagtani ka yara badan tahay midda ay ogoshahay Juve, oo ah €20m iyo bareemiyo misna waxaa soo hagaagaya xiriirka labada kooxood, iyadoo ay haatan Biancocelesti diyaar u tahay inay la xaajooto kooxda difaacanaysa Scudetto-ha, iyadoo uu horay Igli Tare uga eed sheegtay kooxda reer Torino oo uu ku haystey inay u gacan dhaaftay laacibkooda.
Cristiano Ronaldo oo doonaya in loo dhalo Lambarka uu wato oo CARUUR AH!!!!!!!!
CRAIOVA VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!